Mpanamboatra mpamaky vacuum | China Vacuum Lifter Factory
Mpanainga vacuumdia iray amin'ireo vokatra fivarotantsika manan-danja indrindra izay ahitàna ny fantsom-pamokarana gals, ny fantsom-bitsika lozika ary ny hafa manainga banga sns. Ny fitaovana dia mandray ny fifehezana ny rafitra roa, ny vondrona iray misy ny rafitra banga ary ny vondrona iray dia mijanona. Izy io dia mandray paompy banga amerikana THOMAS DC, kodiarana italiana marika METALROTA mitondra kodiarana mavesatra, tobin-tsolika hydraulic BUCHER Switzerland ary batery tsy misy fikojakojana ihany. Mandritra ny fampiasana dia mandeha ny herinaratra, ny fibatana herinaratra ary ny fitrohana herinaratra raha tsy misy loharano ivoho ivelany na famatsian-kery. , Fihodinan-tànana 360 degre, fizarana 90 degre ary fampiasa hafa.
Ny mpamongotra fitaratra vaksinay dia ampiasaina indrindra amin'ny fametrahana sy fikirakirana ny vera, fa tsy toy ny mpanamboatra hafa, afaka mifoka fitaovana samihafa isika amin'ny fanoloana ireo kaopy suction. Raha soloina ny kaopy fisotroana spaonjy dia afaka mifoka hazo sy simenitra ary vy izy ireo. .
Ny mpamindra kaopy suction vera karazana DXGL-HD dia ampiasaina indrindra amin'ny fametrahana sy fikirakirana takelaka fitaratra. Izy io dia manana vatana maivana kokoa ary mahavita tsara amin'ny faritra miasa tery. Misy karazany maro ny safidy enta-mavesatra eo amin'ny maodely samihafa, izay afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa marina tsara.
Mazava ho azy, ny fihodinan'ny tanana sy ny flip manual dia azo ampiasaina amin'ny fihodinana herinaratra na flip. Ity robot moka suction ity dia manana hery mahery sy fananganana miorina. Ampiasaina amin'ny switch japoney digital PANASONIC digital display switch ary ny refin'ny solika batterie, izay afaka manara-maso mazava tsara ny fiasan'ny fitaovana azo antoka. Ny rafitra fanonerana tsindry tsindrona anaty ao anatiny dia miantoka fa ny rafitra banga iray manontolo dia voatazona amin'ny lanjan'ny tsindry azo antoka mandritra ny fikirakirana ny vera. Aorian'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra tsy nahy, ny asan'ny fitazonana tsindry dia afaka manitatra ny fotoana fikarakarana maika ary mampiasa azy io amin'ny fomba azo antoka. Ny endrika azo ovaina dia raisina. Izy io dia azo atambatra amin'ny fomba isan-karazany arakaraka ny filàna, ny fanovana ny toeran'ny kaopy fisotroana ary ny kapoaka suction tsirairay avy dia misy valizy fanaraha-maso mitokana, izay afaka mitsentsitra endrika sy habe amin'ny fitaratra isan-karazany.